डीपीएल-३ मा काठमाडौंको राम्रो सुरुवात | KhelNepal
डीपीएल-३ मा काठमाडौंको राम्रो सुरुवात
धनगढी– तेस्रो संस्करणको धनगढी प्रिमयर लिग (डिपिएल) टी–२० क्रिकेटमा काठमाडौं गोल्डेन्सले सुखद सुरुवात गरेको छ । सोमबारबाट सुरु भएकको डीपीएलको पहिलो खेलमा घरेलु टोली धनगढी स्टार्सलाई ४ विकेटले पराजित गर्दै डीपीएलमा सुखद सुरुवात गरेको हो ।
घरेलु टोली स्टार्सले दिएको १ सय ३३ रनको लक्ष्य पछ्उने क्रममा काठमाडौंले १९ दशमलव ५ ओभरमा ६ विकेट गुमाउँदै उक्त लक्ष्य भेट्टायो । काठमाडौंका लागि अंकित दवासले २० रन जोडे । उनले २ चौका र २ छक्कका प्रहार गर्दै २० रन जोडेका हुन् ।
त्यस्तै गौरभ तोमरले २८ रन जोडे । निकै नै आक्रमक सुरुवात गरेका तोमरले ३ चौका र १ छक्का प्रहार गरे । अनिल साहाले २४, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले ३ र सोनु तामाङले २ रन जोडे । त्यस्तै बिक्रक भुसालले १४ तथा मोहबुब आलमले १२ रनको योगदान गरे ।
स्टार्सका लागि रोमन मुस्तफाले सर्वाधिक ४ विकेट लिए । अमिर हायतर विपिन कार्कीले समान एक एक विकेट लिए ।
यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङको निम्तो पाएको स्टार्सले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १ सय ३२ रन जोडेको थियो । खराब सुरुवात गरेको स्टार्सका लागि अमित श्रेष्ठले अर्धशतकिय पारी खेले । उनले खराव सुरुवात गरेको स्टार्सका लागि अर्धशतकिय पारी खेल्दै स्र्टासको रन उकासेका थिए ।
उनले सन्दीप रजालीसँग ५२ रनको साझेदारी गरे . अमितले ५० बल खेल्दै ४ चौका र २ छक्काको मद्दतमा ५० रन जोडे . सन्दीप रजालीले २८ रन जोडे . उनले ३५ बल खेल्दै चार चौकाको मद्दतमा २८ रन जोडे . सौरभ खनालले २५, पवन सराफले १० रन जोडे ।
काठमााडौं गोल्डेन्सका लागि नन्दन कुमार यादवले २ तथा ललित नारायण राजवंशी र अंकित दवासले समान १–१ विकेट लिए ।